घट्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ? – Khabar Silo
घट्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । मंगलबार तोलामा ७० हजार ७०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार रु १०० ले घटेर ७० हजार ६०० मा कारोबार भएको छ।
यस्तै तेजावी सुन बिहीबार ७० हजार ३०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा तोलामा ८५० मा कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार चाँदी तोलामा ८६० मा कारोबा भएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस :आज पनि बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ? काठमाडौँ । आज बुधबार पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ।
आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ।
त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ भने कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १२५ रुपैयाँ ६७ पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १२६ रुपैयाँ ३३ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्ड १ को खरिदर मूल्य १४४ रुपैयाँ ५० पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १४५ रुपैयाँ २६ पैसा छ।
हेर्नुहोस् अन्य देशको निनिमयदर
Posted on March 10, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । अप्रिलिया ‘एसएक्सआर १६०’ म्याक्सी स्कुटर आजबाट नेपालमा आधिकारीक विक्री सुरु भएको छ । अप्रिलियाको आधिकारिक वितरक विवेक अटोमोवाइलले एसएक्सआर १६०को विक्री सुरु गरेको हो । विभिन्न ४ कलर भेरियन्टमा नेपाल आएको म्याक्सी डिजाइनको यस स्कुटरको मूल्य ४ लाख १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर छ । अप्रिलिया १६० मा सिगंसिलिन्डर एफआइ बीएस ६ इन्जिन […]
तरकारीको बजारभाउ: दशैँको मुखमा महङ्गीको मार
प्रत्येक वर्ष चाडबाड आएसँगै महङ्गी बढेको गुनासो उपभोक्ताहरूको हुने गर्छ।सरकारले चाडबाडको मुखमा सुपथ मूल्यका बजार राख्ने भए पनि त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको बताइन्छ।तरकारीजस्ता भान्छामा दैनिक चाहिने सामानको भाउ खासगरी दशैँ र तिहारजस्ता चाडमै महङ्गो हुने गरेको अनुभव उपभोक्ताहरूको छ। विदेशमा चाडबाडका बेला सामानमा भारी छुट दिने गरिए पनि नेपालमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो […]
सरकार पूर्णत: असफल भयो, अब जनगणतन्त्र चाहिन्छ : सिपी गजुरेल